Xaflado Lagu soo dhaweynayo Maalinta xuska Ururka SYL oo ka dhacay Dalka – SBC
Xaflado Lagu soo dhaweynayo Maalinta xuska Ururka SYL oo ka dhacay Dalka
Xafaladaha lagu xusayo 15-ka May Maalinta Dhalinyarada Soomaaliyeed ama 68sano guurada aas aaskii ururka SYL ayaa waxaa ay ka dheceen magaalooyinka Waawen ee Puntland iyo qeybaha kale ee Dalka sida meelo ka mid ah Koonfurta Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho Waa caasimada dalka waxaa maanta ka dhacday xaflado gaar gaar ah oo lagu xusayo munaasabadan qaaliga ah waxaana xafladahaasi dhamaantood soo qaban qaabiyay ururada dhalinyarada ee iyagu halkaasi ka jira .
Waxaa diirada lagu saarayay xafladahaasi munaanta maalintan 15ka May ay ku leedaha Umada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay tahay xuska aas aaskii ururkii dhaliyay xornimada ay maanta Somalidu harsaneyso .
Sidoo kale waxaa iyana ay ka dheceen xafladaha Ceynkan oo kale ah magaalooyinka gobolada Bartamaha Soomaaliya sida Dhuusamareeb, Gaalkacyo iyo weliba deegaano kale .
Xaflado ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada ayaa iyana lagu kala qabtay magaalooyinkaasi waxaana ka mid ah xaflad lagu qabtay Magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhanka Maamulka Galmudug taas oo ay isku soo duba rideen dhalinyarada maamulkaasi iyagoona xafladahooda ku xusayay maalinta 15ka May ee dhalinyaradii SYL .
Dhamaan waxaa muuqaneysa Maanta in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka siiba Maamulada Puntland iyo Galmudug in ay siweyn ugu faraxsanaayeen xuska iyagoona maamuus aad u qiibo badan ku soo dhaweeyay maalintan maanta ah ee xuska dhalinyaradii 13da aheyd ee SYL.